( ခရေတန်းက လွမ်းပုံပြင် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( ခရေတန်းက လွမ်းပုံပြင် )	12
( ခရေတန်းက လွမ်းပုံပြင် )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Mar 25, 2015 in Creative Writing, Poetry | 12 comments
အဆောင် ၄ ရဲ့ ဘေး ခရေတန်းလေးမှာ
ရှေးအခါက မဟုတ်တဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဟာ
တကယ်သရုပ်ပါစွာနဲ့ ရှိခဲ့ဘူးလေတယ် ၊
နန်းထိုက်တမူ လှမ်းလိုက်ယူ ခရေပန်း
ကြည်အပြုံးနဲ့ သူလက်ခံ ချူရတက်မာန်ပွားရသူမို့
ခရေကြိုက်သူလေး ကြားစေသား ၊
ခင်ဇော် says: စုံတွဲတွေတိုင်း လျှောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ခရေပင်လည်း ငါမလျှောက်ဖူးဘူးးး
စုံတွဲတွေတိုင်း ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကန်တော်ကြီးလည်း ငါမရောက်ဖူးဘူးးး
တောင်ပေါ်သား says: အသီးမဲ့သူတွေက ဒါမိုး ဘယ်ခံစားတတ်မတုန်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: တုံးခုလို့မှလှမ်းမရရင် တပင်လုံးခုတ်ပစ်မယ်… မှတ်ထားကွယ် … တညားလဲ တချင်းရှိုဒါ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ဒီအပိုဂျီးတွေ အဲ အဲ ဆောဒီး ဒီအပျိုကြီးတွေနဲ့တော့ ခက်ပါတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ဟွင်းဟွင်းးး ဘယ်နှစ်ပင်ရှိဘီမှတ်လဲ ခုတ်လာဒါ… တေတွားမယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: သတ္တိရှိရင် MICT Park အဆောင် ၄ ဘေးက ခရေတန်းကိုလာခဲ့ ၊
ဓါတ်ပုံက အဲ့ခရေတန်းပဲ ၊ ဒီညနေ ၃ နာရီကမှ ရိုက်ထားတာ ၊ Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: အို…တစ်ပင်တည်း…ရင်ထဲက..နွယ်…
ရစ်ပတ် ငင်တယ်…. (ငင်တယ် = အသက်)
တောင်ပေါ်သား says: ခုဟာက နွယ်နဲ့ဆိုင်ဘူး ၊
လောင်း လောင်း အဂိုးက Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: အခုတလော…အိုးမြူး….. အတော်လေး ကဗျာဆန်နေတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဦးမျိုးတို့ Yoon Na လေးကို သတိမရနိုင်တော့ဘူး
naywoon ni says: ခ​ရေပန်း​ခြောက်​က ​ရောင်းစားလို့မရဘူး ။ တရုပ်​စကားပန်း​ခြောက်​ကမှ ​ရောင်းစားလို့ရ​သေး ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: @Maung Thura
ဒီလိုပါပဲ ၊၊ အဲဒီခရေတန်းက တကယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကို သတိရသွားလို့ ၊
အဲဒီတုန်းက ကိုယ်က မြားနတ်မောင်
Yoona က ထာဝရပါဗျာ naywoon ni အခုပဲ အဲဒီခရေတန်းကိုဖြတ်ပြီး ထမင်းသွားစားတာ ၊
ခရေနံ့လေးတွေက မွှေး . . . လို့